कसको प्रेममा खलनायक बने निखिल ? (रुद्र प्रोमो) « Ramailo छ
कसको प्रेममा खलनायक बने निखिल ? (रुद्र प्रोमो)
निखिल उप्रेतीको निर्माण तथा अभिनय रहेको फिल्म ‘रुद्र’ को प्रोमो रिलिज गरिएको छ । शुक्रबार प्रेसमिट गर्दै रामजी लामिछाने निर्देशित फिल्मको प्रोमो रिलिज गरिएको हो । प्रोमोमा निखिलको एक्सन र नव कलाकारद्वाय विश्व शर्मा र साराको रोमान्स देख्न सकिन्छ । प्रोमो हेर्नुस् :
साउन १३ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘रुद्र’ मा निखिल खलनायकको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । विश्व र साराको प्रेममा निखिल भिलेन बन्न आउने प्रोमोमा देखिन्छ । निखिल, विश्व र सारासँगै रुद्रमा रोयदिप, ध्रुव कोइराला, ज्याक श्रेष्ठ, भाष्कर ओली, अनिल पाण्डे लगायत, वितरक गोपालकाजी कायस्थको अभिनय रहेको छ ।
हिमाल केसीको द्धन्द्ध निर्देशन रहेको फिल्ममा दिनेश सुनाम र निखिल आफैंले पनि संगीत दिएका छन् भने कोरियोग्राफी निर्देशक लामिछाने नै गरेका हुन् । एक्सन लभ स्टोरी फिल्म रुद्रले दर्शकलाई कत्तिसम्म आकर्षण गर्ला ? साउन १३ सम्म प्रतिक्षा गरौं ।